शिक्षा मन्त्रालयलाई खुलापत्र | नुवागी
आदरणिय शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी
विभिन्न सरकारी र सामुदायिक स्कूलहरुमा वर्षेपिच्छे स्कूलको ड्रेस फेरिन्छ । सामूदायिक र सरकारी स्कूलमा आउने छात्र/छात्रा गरीब समुदायका नै हुन्छन् स्कूलको व्यवस्थापनले ‘कमिशन’ का चक्करमा जब निलो रंगको सर्ट र प्यान्ट/ स्कर्टको सट्टामा “धर्के रातो, बैजनी जस्ता लुगाहरु लगाएर स्कूल आउनु, स्कूलको डे«स फेरियो” भन्ने उर्दी जारी गर्छन्, तब त कति गरीबहरु छात्राहरुले कि त स्कूल नै छोड्नु पर्छ, कि त धेरै छाक छोडनु पर्छ ।
यो विषयमा स्कूलका शिक्षकहरुलाई भन्दा “माथिबाट भएकोले केही गर्न सक्दैनौ भन्छन् । को माथि भन्दा कोही बोल्दैनन् । आकाशबाट ईश्वरले “स्कूलको यूनिफर्म फेर्नु” भनेर त पक्कै आदेश गरेको होइन होला । माथि भनेको शिक्षा मन्त्रालय हो भन्ने विचार गरेर मैले शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिवहरुलाई पनि मौखिक रुपमा यो ‘समस्या’ बताए । किनभने कतिपय विद्यार्थीका भाइ बहिनीले पनि दिदी दाजुको सानो भएको पुरानो निलो रंगको पाइन्ट र स्कर्ट लगाएर स्कूल आउँछन । तर यदि प्रत्येक वर्ष यूनिफर्म फेरिए त कसरी उनीहरुले लगाउन सक्छन र ? अनि सरकारी “यूनिफर्म” फेर्नको मतलब त केही पनि छैन । यसले न शिक्षकले राम्रो पढाउँछ , न विद्यार्थीले राम्रो सिक्छ । के स्कूलको ‘यूनिफर्म’ बदल्नाले स्कूलका शौचालय सफा हुन्छ ?
के यूनिफर्म बदल्नाले स्कूलको छानाबाट पानी चुहिन रोकिन्छ ? के स्कूलको यूनिफर्म बदल्नाले स्कूलमा पुस्तकालय बनेर पुस्तक आउँछ ? अवश्य केही पनि आउँदैन । युनिफर्म बदलिंदा स्कूलका केही व्यक्तिहरुको व्यालेन्स बढछ, तर विद्यार्थीको घरको आर्थिक व्यालेन्स बिगन्छ । कि त सरकारी स्कूलमा जुन लुगा लगाएर आएपनि हुन्छ भन्नु प¥यो , कि त सरकारी नियमको पालना गरेर निलो पाइन्ट स्कर्ट र सर्ट नै चलाउनु प¥यो । यती सानो कुरामा पनि शिक्षा मन्त्रालयले हेर्दैन भने ठूला ठूला कुरा गरेर केही फाइदा छैन । शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुँदा अनेक ताम झाम गरेर ‘स्कूलमा ९६% विद्यार्थी भर्ना गरेको’ तथ्याङ् छ (वा मिथ्याकं) निकाल्यो तर कति सरकारी स्कूलमा कस्ता पूर्वाधार छन भनेर सरकारले कहिले तथ्याकं निकाल्ने होला ? स्कूलमा विद्यार्थी बस्न मेच नभए पनि निजि विद्यालयका जस्ता “लुगा र टाई” लगाएर आउनु पर्ने झंझट लागेर विद्यार्थीले स्कूल छोड्नु परेको घटना शायद शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई थाहा हुँदैन, कहिले सरकारी स्कूलको अनुगमन गर्न गए चाँहि पत्ता लागथ्यो । मैले यसरी स्कुलको “यूनिफर्म फेर्दा विद्यार्थीलाई समस्या हुन्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई इमेल लेखेपछि वहाँले जवाफ पठाउनु भयो ‘अहिले केन्द्रको सरकारले भन्दा प्रदेशले नै यो निर्णय गछौं । “प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको शिक्षा मन्त्रालयले यसरी जथाभावी विद्यार्थीको यूनिफर्म परिवर्तन गाउँको औचित्य नभएको कुरा भन्न सक्दैन र ” मैले मनमनै प्रश्न गरें ।
म यो किन लेख्दैछु भने कुनै न कुनै काममा जिल्ला तिर जाँदा स्कूल र स्वास्थ्य चौकिमा छिर्छु नै । म त्यस्ता केही संस्थासँग पनि आबद्ध छु , जसले छात्राहरुलाई स्कूलमा पढाउन प्रेरणा दिन, यूनिफर्म, कापी, किताब आदि दिएर सहयोग गर्छन् । तर जब धेरै स्कूलमा थरी थरीका यूनिफर्म हुन्छन् । तब त्यसले त्यसरी सहायता दिने संस्थालाई पनि गाह्रो पर्छ । यसले गर्दा विद्यार्थीहरुले स्कुल छोडेको घटना सुनिन्छन् , मन दिक्क हुन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय उच्च अधिकारीलाई पहिले २–३ वर्षसम्म भन्दा भन्दा, कसैले वास्ता गरेनन् , दिक्क भएपछि आम संचार माध्यममा आउन करै लाग्यो । प्रायः सबै शिक्षाविद कसरी विश्व विद्यालयमा पढाइ राम्रो गर्ने भने छलफल गर्छन् । तर प्राय कमैले स्कूलको पढाई र अवस्था सुधार्न तर्फ ध्यान दिन्छन् । त्यसमाथि पनि स्कूलको युनिफर्म वा ‘ड्रेस’ को बारेमा त कसैले करै उठाउँदैनन् । ठूला ठूला कुरा गर्नुको साटो साना कामलाई पनि विचार गरेर हेरि दिए त कमसेकम गरीब छात्र/छात्रा पनि स्कूल त जान पाउँथे होला । दिदीको लुगा पुरानो भएपछि बहिनीले लगाएर स्कूल जान पाउने वातावरण बने त कती राम्रो हुन्थ्यो होला शिक्षा कन्त्रालयले यो कुरा बुझला ?
यो लेख डा. अरुणा उप्रेतीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी हुन् । यसलाई साभार गरिएको छ ।